RETURNOFKINGS အသွားအလာကိုသတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ MISOGYNY ကိုရပ်ကြစို့ - သတင်း
ReturnOfKings အသွားအလာကိုသတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ misogyny ကိုရပ်တန့်ကြစို့
ငါဒီကိုဘယ်ကစလုပ်သလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကသူတို့ဆောင်းပါးတွေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်ထိမိသွားတဲ့အချိန်မှာ၊ ဒါကဟာသဖြစ်ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတစ် ဦး trolls site ကိုလူတွေရဲ့အာရုံကိုချွတ်ရဲ့အစာကျွေးပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့် site သည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆီအရှုပ်တော်ပုံ၊ သားကောင်များကိုအပြစ်တင်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးရေးရာဝါဒကိုမုန်းတီးခြင်း၊ ဒါပေမယ့်ကြောက်စရာကောင်းတာကဟာသမဟုတ်ဘူး - တကယ်တော့ဒီစာရေးဆရာတော်တော်များများဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ Neo-masculinists လို့ယူဆကြပြီးသူတို့ပြောသောမှားယွင်းမှုကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ကြသည်။
ဒီလူတွေအကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူးဆိုရင်ဒီ site ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာစစ်ဆေးကြည့်ဖို့အားလုံးကိုသင်တို့အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ReturnOfKings.com ။
sco pa tu manaa ဗမာထဲတွင်
7 အထွေထွေ cheater အမျိုးသမီး Cheater ထက်ပိုကောင်းတဲ့အကြောင်းရင်း ၇
အခြေခံအားဖြင့်ဤဆောင်းပါးသည်ယောက်ျားများကိုလိမ်လည်လှည့်စားရန်အဘယ်ကြောင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်ခွင့်လွှတ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်ဆိုသည့်အကြောင်းပြချက်များပါသောအကြောင်းပြချက်မရှိသောအကြောင်းပြချက်များစာရင်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ ဆိုးရွားရသနည်း။ ဒါဟာအရေခြုံခြင်းနှင့်နှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများ reeks ။ အဘယ်ကြောင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရုံရိုးရှင်းစွာမဖြစ်နိုင်ဘူး မဟုတ်ဘူး လှည့်စားရန်? လိမ်လည်ခြင်းသည်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်မှားယွင်းပြီး၎င်းကိုနားလည်ရန်မခက်ခဲပါ။
မထိန်းချုပ်နိုင်သောတိုက်တွန်းချက်များ? ငါ့ကိုခဏပေးပါ ၎င်းသည်အမျိုးသားများသည်တိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့ဘောင်းဘီတွင်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်ကိုမသိသောကြောင့်သူတို့၏ဇနီးများနှင့်ချစ်သူများအပေါ်လိမ်လည်လှည့်စားလိုသောကြောက်မက်ဖွယ်တိကျသောအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေသည်။
၃ အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးများနှင့်သင်မချိန်းတွေ့သင့်သည့်အကြောင်းရင်း ၃
ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်အောက်၌ဤနည်းနည်းသာရှိ၏ - နို့ပျက်စီးသောအခါနွားမဝယ်ပါနှင့်။ လုံလောက်ပါတယ် ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လှပသောမျက်နှာများနှင့်ကလေးများပြုလုပ်သည့်စက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤစာကိုရေးခဲ့သူအား၊ အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးများ (သို့မဟုတ်ထိုကိစ္စတွင်ပါ ၀ င်သောမည်သည့်အမျိုးသမီးများ) သည်ကြိုက်နှစ်သက်သောနေ့စွဲကိုမှချိန်းတွေ့လိုမည်မဟုတ်ဟုငါပြောရန်ခွင့်ပြုပါ။ မင်း ။ အလေးအနက်ထား, ဒီမှာထဲက fuck ဆိုတဲ့ရ။
အမျိုးသမီးများအားလုံးသည်အိမ်ထောင်ပြုလို၊ ကလေးမွေးလို။ ၊ မိတ်ဖက်များနှင့်မိတ်ဆွေခင်ပွန်းများထံမှအာရုံစူးစိုက်မှုရှာလိုကြသည်ဟုသင်ဆက်ပြောသည်။ အဘယ်အရာကိုပြော heteronormative အရာ။ အမျိုးသမီးအားလုံးသည်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းတန်းတန်းမတ်မတ်ရှိခြင်း၊ ကလေးမွေးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ကာလမည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးတွင်မဆိုလိုချင်ခြင်းများရှိကြသည်မဟုတ်။ မိန်းမတွေအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဆွဲဆောင်မှုနည်းလာတယ်။ ခင်ဗျားကိုအကြံပေးချက်ကဒီအမှိုက်သရိုက်မစတင်ခင်မှန်ကိုအရင်ကြည့်ပြီးမှန်မှန်ကြည့်ပါ။
လွန်ခဲ့သော (၄) နှစ်တာကာလအတွင်းဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏စာရေးသူများသည်သူတို့၏စိတ်စွန်းကွက်မှုနှင့်အထင်မကြီးမှုတို့အတွက်မပြတ်တမ်းအခြေပြုခံခဲ့ရသည်။ တကယ်တော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာပြန်သွားတာငါအထူးသဖြင့်ဒီဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးမှတ်မိနေတယ်၊ ​​၅ ပါတ်ဝန်းကျင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာစာစားရင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရမယ့်အကြောင်းရင်း ၅ ချက်ကိုဖတ်မိတယ်။
၎င်းကို ABC သတင်း၊ ဘောက်ဇ်ဖိုက်၊ ဟတ်ဖင်တန်ပို့စ်၊ ၀ ါရှင်တန်ပို့စ်စသည့်မီဒီယာဌာနများမှပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့သည်။ Google ကပဲ။ ဒါဟာလုံးဝရွံရှာဘွယ်ပါပဲ။ ဤသည်ဖြစ်ခြင်းအတွက်မှားယွင်းစွာလွဲမှားသောအကြောင်းရင်းများ ၁) ။ သူမသည်သတိ2အလေးချိန်သတိဖြစ်ပါတယ်။ သူမကိုယ်သူမငတ်နေတဲ့အတွက်ပိုက်ဆံနည်းတယ်။ သူမသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်ရှိပြီး ၄ င်းကိုလှည့်ပတ်ထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူမအများဆုံးဖွယ်ရှိဆင်းရဲသောသူနှင့် 5) ပါပဲ။ သူမသည်အရူးနှင့်အိပ်ရာအတွက်ထို့ကြောင့်ပိုကောင်းပါတယ်။
ထို site ကိုတည်ထောင်သူ Daryush Roosh Valizadeh အမည်ရှိအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ ReturnOfKings သို့ပုံမှန်ဆောင်းပါးများဖြည့်စွက်ခြင်းအပြင်သူသည်တစ်ချိန်ကသူသည်အဓမ္မပြုကျင့်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းကိုအားပေးသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်။ သရော်စာရေးသားခဲ့သည်။ ဤသည်မှာလည်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာ၏နောက်ထပ်ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်အကယ်စင်စစ်၎င်းသည်သရော်စာမျှသာဖြစ်ခဲ့လျှင်ပင်၎င်းသည်အရသာညံ့ဖျင်းခြင်း၌သာရေးသားထားခြင်းမဟုတ်ဘဲအလေးအနက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအပေါ်သူ၏အာရုံမခံစားနိုင်မှုနှင့်လုံလောက်မှုမရှိခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ Valizadeh သည် Fat Shaming Week ကိုပင်အစပြုခဲ့ပြီးသူနှင့်သူ၏အဖွဲ့ ၀ င်များသည်ပိုကြီးသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်အနုတ်လက္ခဏာဆောင်းပါးများကို တင်၍ အကောင်းဆုံးစံပြအမျိုးသမီးတစ် ဦး မည်သည်ကိုပုံဖော်မည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Roosh Valizadeh မှမုဒိမ်းမှုကိုမည်သို့ရပ်ဆိုင်းမည်နည်းဆောင်းပါးမှကောက်နုတ်ချက်
ရာဇပလ္လင်ရာသီ 8 ဇာတ်လမ်းတွဲ5memes ၏ဂိမ်း
လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၏ဂုဏ်အသရေသည်ဤစာရေးဆရာများအားဤကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျများရေးသားရန်အခွင့်အရေးနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြင်သူတို့၏ဆောင်းပါးများကိုဖြိုဖျက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ငါစာရေးဆရာအဖြစ်ငါရတယ်, ငါမုန်းသကဲ့သို့သူတို့နှင့်အဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုငါရ။ အချို့သောသူများကဤဆိုဒ်ကိုတုန့်ပြန်ပြောဆိုကြသော်လည်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်သည်ထိုကဲ့သို့သောအမုန်းတရားနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုဖြန့်ကျက်။ ထောက်ခံအားပေးသူများအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သင့်သည်။ မျဉ်းကြောင်းသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုလူများစွာကမေးကြသည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နှင့်ဤပြောဆိုချက်ကိုပြောကြားပါမည်။ ReturnOfKings သည်အလွန်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်ပြီးပညာရှိသောမိန်းမသည်ဤရှေးကသြောမှားယွင်းသောမှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များကိုဖော်ထုတ်သောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမျက်နှာသာပေးလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ၂၁ ရာစုသည်အသံကျယ်ကျယ်အော်ငိုရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ရေးသားခြင်းသည်အမျိုးသမီးများကိုစော်ကားမှုနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေရုံသာမကဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်သူများနှင့်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထိခိုက်လွယ်သောကောင်းသောယောက်ျားကောင်းများအားလည်းအားနည်းစေပါသည်။ ဒီမှာငါ့အမှတ်ပဲအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ရဲ့ညာဘက်အဘို့အတိုက်ခိုက်နေအကြောင်းကိုထက်ပိုပါတယ်။ ဤသည်သည်သင်၏ဇနီး၊ အမေ၊ သမီး၊ အစ်မ၊ အဒေါ်၊ သူငယ်ချင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်၎င်းသည်နက်ရှိုင်းစွာချစ်မြတ်နိုး။ ဂရုစိုက်ဖူးသောဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိမည်သည့်အမျိုးသမီးအသင်းဝင်ကိုမဆိုထိခိုက်သည်။
ကျွန်တော်ကိုးကားချက်တွေ၊ ဆက်နွယ်မှုတွေအကြောင်းပြောနေလေလေသူတို့ဘက်ကအာရုံစိုက်လေလေဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကဒီ site ကိုအသွားအလာနှင့်လူကြိုက်များမှုပိုပေးစေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒီ site ၏အကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ တိတ်ဆိတ်စွာနေနေရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကငါဟာကမ္ဘာကြီးကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာအမြဲတမ်းဖျက်သိမ်းပစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားစေမယ်ဆိုပြီးကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းကျိုးပြုမယ်လို့ငါထင်တယ်၊ နောက်မှစောစောပြန်မယ်မျှော်လင့်နေတဲ့မုန်းတီးမှုအုပ်စုကိုဆန့်ကျင်ပြောဆိုခြင်းပဲ။ #ByeFelipe